Ukhenketho lwefektri - iSinopulse Hose Factory Co., Ltd.
I-Sinopulse Hose Factory ineminyaka eli-15 yokuvelisa kunye nokuthumela kwamanye amazwe i-hose hydraulic, i-hose ye-industrial kunye ne-fittings, idlulile i-ISO 9 0 0 1 kunye nesatifikethi se-MSHA. IBrand Sinopulse ithengiswa kumazwe amaninzi kwihlabathi liphela.
Iworkshop yonke igubungela ngaphezulu kwe-20,000 yeemitha zesikwere, ibandakanya indawo yokusebenzela yokuxuba irabha, indawo yokufundela ye-mandrill ethambileyo, iworkshop yemandrill enzima, iworkshop ye-non-mandrill, isakhiwo seofisi.
Ukugcina umgangatho ozinzileyo kunye nokusebenza okuphezulu, sigxila kwizixhobo, kulawulo nakwinkqubo yolawulo lomgangatho, ukusuka kwizinto ezingavunyelwanga, kugqityiwe kugcinwa iimveliso, Onke amanyathelo abekwe esweni.
Izinto zokwenza imveliso zelabhoratri zenza uvavanyo kuqaqamba lwelaphe elunxwemeni, ukuqina kwentsimbi, ukunamathela phakathi kwerabha kunye nocingo lwentsimbi, ijika yerabha yokuqunjelwa.
Kukho iyunithi yokusebenzela eyahlukeneyo enikezela ngenkqubo eyahlukeneyo yemveliso. Iphepha lokuqala, elixubileyo kunye nerabha ye-LG kunye nesantya esiphezulu somatshini odibeneyo ukulungiselela ucingo oludibeneyo lombhobho we-hydraulic.
Samkele ukwaluka koomatshini kunye nokujikeleza koomatshini ukuze kuqinisekiswe ukuba ukuqiniswa kwentsimbi ngaphandle konxibelelwano. JERMANY MAYER EZIPHAKAMILEYO ngesantya UKUQEQESHA KOMATSHINI, ITALY VP KOMATSHINI, EZIPHAKAMILEYO SPEED KOMATSHINI KOMATSHINI kusenza ukufezekisa imveliso ephezulu phantsi kweminyaka oluzenzekelayo.
Ukondla okubandayo umatshini wokukhupha ngaphandle kwirabha yangaphakathi nangaphandle, enokulawula ithumbu lobungakanani berabha ngokuchanekileyo; Ngeli xesha, sinokwenza uphawu olwenziwe ngokwezifiso ukuprinta kumbhobho.
Emva kwemveliso, yonke ithumbu iya kuvavanywa phantsi kwenqaku elinye koxinzelelo lwexesha lokusebenza.
Ngaphandle koko, ibhetshi nganye kuvavanywa uxinzelelo lokugqabhuka kunye novavanyo lwempembelelo. Kuphela ziimveliso ezifanelekileyo ziya kuthunyelwa kumthengi.
Uya kwamkelwa ngokufudumeleyo KWISINOPULSE